पुटिनको उदयपछि रुस यसरी बन्यो संसारकै शक्तिशाली देश, अमेरिकालाई महाशक्ति दाबी गर्न लाज ! – Dainik Sangalo
पुटिनको उदयपछि रुस यसरी बन्यो संसारकै शक्तिशाली देश, अमेरिकालाई महाशक्ति दाबी गर्न लाज !
October 6, 2020 346
शीतयु’द्ध समाप्त भएपछि अहिले आएर रुसको सैन्यक्षमतामा वृद्धि भएर अत्यन्त शक्तिशाली बनेको एक बेलायती थिंकट्यांकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विशेषगरी उसको आणविक हतियार र वायुसेनाले शक्ति आर्जन गरिरहेको बताइएको छ ।
एक दशकसम्म सैन्यशक्ति अभिवृद्धि गरेको रुसको सेना यु’द्धका लागि तयारी अवस्थामा रहेको भनी लेखिएको छ । उसका ल’डाकू विमानहरू सबै चुस्त’दुरुस्त छन् र सेनाले उच्चतम प्रविधि उपयोग गर्ने गरेको छ । सैनिकहरू सबै व्यावसायिक छन् ।
मस्कोसँग संसारकै सबभन्दा धेरै आणविक वारहेडको संकलन छ । ऊ अब ध्वनिको गतिभन्दा निकै तीव्र गति भएको हाइपरसोनिक क्षे’प्यास्त्र बनाउन लाग्दैछ । उसले आणविक पनडुब्बीहरू पनि अत्याधुनिक बनाउँदैछ ।
इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्रोटेजिक स्टडीजको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सोभियत संघको पतन भएदेखि पहिलोपटक रुसको सैन्य क्षमता बढेको हो र यसले गर्दा भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन, सिरिया तथा अन्यत्र प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएका छन् ।
रुस र पश्चिमको सम्बन्धमा दरार आइरहेको अवस्थामा उक्त संस्थाको स्ट्राटेजिक डोसियरले रुसको सैन्य क्षमता वृद्धि भएकाले मस्को ह’ति’यार प्रयोग इच्छुक देखिएको भनी चेतावनी दिएको छ ।
रुसका परम्परागत सैनिकहरूलाई सोभियत संघको पतन भएपछि एकदमै कम रकम उपलब्ध गराइएको थियो । क्षे’प्या’स्त्र’मा मात्र ध्यान दिइएको थियो ।
रुसले सन् १९९० को दशकमा चेचेन्यामा र सन् २००८ मा जर्जियामा रक्तरञ्जित यु’द्ध ल’डेको थियो अनि त्यसमा उसका ह’ति’यार र सैन्य प्रशिक्षणका कमजोरीहरू उजागर भएका थिए ।
त्यसपछि सन् २०१० मा स्टेट आर्मामेन्ट प्रोग्रामलाई स्वीकृति दिइयो । त्यसपछि रुसको जलसेनालाई अत्याधुनिक ल’डा’कू विमान र जमीनमा मा’र हा’न्ने क्रु’ज क्षे’प्यास्त्रहरू किन्नका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको थियो ।
सोभियत कालका सेनाभन्दा अहिलेका फौजहरू थोरै छन् तर अत्याधुनिक ह’ति’यारले सुसज्जित छन् ।
रुसको सैन्य शक्तिमा आएको परिवर्तनले आफूलाई महाशक्ति दाबी गर्ने अमेरिकालाई लाज लागेको अमेरिकी सैन्य विश्लेषकहरूले नै दाबी गर्ने गरेका छन् ।
Prevबीबीएस प्रथम बर्षमा धनकुटाकी समिता ढुङ्गेल नेपाल टप
Nextजंगलमा बच्चा छाड्ने आमा पक्राउ, यस्तो रहेछ बच्चा छाड्नुको कारण !
बाघको आ,क्रमणबाट ज्या,न गु,माएकी मृ,तकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइने
कोरोनाविरूद्धको खोप यसै वर्ष आउने बेलायती कम्पनी एस्ट्राजेनेका दाबी
पोर्चुगलमा भिडियो कल गरेर ‘ल गए बाई बाई फुपाजु’ भन्दै भिडियो देखादै हा’ म फा’ लेर आ’, त्म, ह’, त्या
एक मात्र भाई गुमाएका महानायक राजेश हमालले यस्तो तस्विर राखेर लेखे भावुक स्टाटस